Izindaba - Ibhulogi Yomkhiqizo: Umkhawulo Womthwalo Wokusebenza
Umkhawulo Womthwalo Wokusebenzaumthwalo omkhulu wokusebenza kuhlelo lokusebenza. Akunandaba noma ngabe yimikhiqizo yokulawula indwayimane noma yokulawula izimpahla, okuwukuphela kwento odinga ukuyikhathalela Umkhawulo Wokusebenza KomthwaloUmkhawulo Womsebenzi Wokuphepha.
Ungahle uhlangane nelinye igama elithi Min. Ukwephula Amandla. Ubudlelwano bayo obuyisisekelo bunjengama-belows:
Ubuncane. Ukwephula Amandla = Umkhawulo Womthwalo Wokusebenza x Isici Sokuphepha
E-sceanario ehlukile, into yokuphepha ingahluka kakhulu:
1) Ngokuphakamisa Indwayimane
EYurophu, ukuphepha kungu-7 kuye ku-1.
Ngenkathi ise-United States, kungu-5 kuye ku-1.
2) Ukulawulwa Kwempahla
EYurophu, ukuphepha kungu-2 kuye ku-1.
Ngenkathi ise-United States, kungu-3 kuye ku-1.
Umkhawulo Womthwalo Wokusebenza (WLL) ubaluleke kakhulu kune-Breaking Strength (BS) lapho ukhetha ibhande. I-WLL ingu-1/3 wamandla okuphuka ngoba umthwalo uzosinda kathathu ngesisindo laphoKusetshenziswa ama-G-Forces.
Ukukhetha imichilo eyiyo qiniseka ukuthi kuhlanganiswe i-WLL = Isisindo seCargo
QAPHELA: Bheka imithetho nemithethonqubo yasendaweni ukuqinisekisa ukuthi kusetshenziswe imichilo elungile yohlobo lwakho lomthwalo. Izinhlobo ezahlukene zempahla zingadinga inani eliphansi lama-tie downs.
Ngokuya nge-WLL nemithetho / imithethonqubo, kungumsebenzi womsebenzisi ukunquma inani lezintambo ezidingekayo ukuvikela umthwalo wakhe ngokuphepha.
Masithathe umkhiqizo wokulawulwa kwempahla e-US ngokwesibonelo:
Uma umthwalo wakho ungama-1,000 lbs. iba ngama-3,000 lbs. kusetshenziswe ama-G-Forces.
Uzodinga izinketho zokubopha ezingezansi ukuvikela ngokuphepha:
2 Straps nge 500 lbs. I-WLL nama-1,500 lbs. Break Amandla
4 Straps nge 250 lbs. I-WLL ne-1,000 lbs. Break Amandla
Ngalezi zinketho, uphumelele:
I-WLL ehlanganisiwe = Isisindo seCargo (1,000 lbs.)
I-BS ehlanganisiwe = Isisindo se-Cargo nama-G-Forces asetshenzisiwe (ama-3,000 lbs.)
Ngabe ucacile ngakho konke lokhu manje?
Sicela ungibuze ukuze uthole olunye ulwazi.